Nolosha xabsiga ma fududaan, dheh maxaabiis hore - dadku - WAA KU SAMEE
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Nolosha xabsiga ma fududaan, ayaa sheegaya maxaabiis hore - dadku
Xabsiga dhexdiisa ma fududaan, dadka hore ayaa loo yidhi
Aroortii hore ee 2015 halkaas oo Holli Coulman aaday xabsiga Victorville ee amniga ugu yar ee lamadegaanka sare ee Kaliforniya, waxay eegtay gurigeedii ugu dambeeyay waxayna hubisay inay quraac wanaagsan qaadatay - maxaa yeelay ma aysan ogeyn goorta ay yeeli doonto.
Riix halkan haddii ay dhibaato kaa haysato fiirinta fiidiyowga qalabka gacanta
Markii uu yimid, kaaliyaha hore ee fulinta Hewlett-Packard, oo lagu xukumay musuqmaasuq la xiriira kaararka amaahda ee shirkadda, ayaa dhunkaday ninkeeda nabaddoon banaanka qolka soo dhaweynta. Waxay markaa ka soo gudubtay albaabka nolosha markii ay ahayd maxbuus federaal ah: waxay ku taagneyd warqad yar oo bunni ah, oo ay gashanayso dharkeeda, geerashkeeda iyo dusha sare iyo tahriibta. Coulman, oo hadda lataliye ka ah la taliyayaasha Xabsiyada ee Wall Street, ayaa sheegtay inaysan noqon doonin sharaf-xumadii ugu xumeyd ee ay ku soo gaarto xabsi maxbuus oo federaali ah.
Atariishada Lori Loughlin iyo seygeeda Mossimo Giannulli waxay ka baxaan guriga maxkamada Boston kadib dhageysiga kiiska ka horeeyey, bishii Agoosto 27. (Joseph Prezioso / AFP / Getty Images)
Maalinta jimcaha, Aktarada Felicity Huffman ayaa eegi doonta haddii masiirkeeda ay sidoo kale ku lug leedahay in lagu sii daayo xarunta xabsiga ee Mareykanka. Kow iyo toban waalid oo kale oo hodanka ah oo qirtay dambiga fadeexadda oggolaanshaha kulliyadda ayaa ogaan doona masiirkooda labada bilood ee soo socda.
Huffman iyo waalidkan, Coulman iyo maxaabiis kale oo hore ayaa nooga digaya inaysan jirin hab loosoo maro sokorta. Waa sida baararka dambe.
"Waxay ahayd mid naxdin leh," ayay tiri guruubka nolosha Martha Stewart wareysi lala yeeshay 2017 . "Ma jiraan wax fiican, waxba."
Dadka cadaanka ah ee lagu eedeeyey sida Huffman, waalidiinta Bay Area waxay ku eedeeyeen fadeexada iyo xiddigii hore ee "Full House" Lori Loughlin - oo qirtay dambiga ah isla markaana iska difaacaya - xabsi ay kujirto waxay ka dhigan tahay ka tagida qoysaskooda. iyo guryahooda kala fog oo ay galaan adduun ay ku nool yihiin guryo buuq badan iyo buuq badan leh, cuno cunnooyin "xunxun", waxaa si joogto ah u ixtiraama ilaalada oo aan lahayn awood ay ku xakameeyaan waqtigooda iyo booskooda gaarka ah.  Marka la eego xaqiiqadan, maahan wax la yaab leh in Huffman uu la dagaallamo xukunka hal bil oo xukun-qaadayaasha ay ku taliyaan. Qareenadeeda, iyada oo ku tiirsan talo bixinta saraakiisha probation, waxay sheeganayaan in qofna uusan ku dhicin dhibaato dhaqaale iyada, sidaa darteed waa in la siiyaa tijaabada, adeegga bulshada, iyo ganaax 20 000 $ . Laakiin xafiiska xeer ilaaliyaha Mareykanka ayaa codsaday in la siiyo muddo xabsi ah waalidkii galay heshiis qirasho, isaga oo sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la muujiyo in xitaa kuwa hodanka ah iyo kuwa xoogga badan aysan sharciga ka sarreynin.
Waxay sidoo kale doonayaan hal bil oo loogu talagalay Peter. Jan Sartorio, oo ka tirsan Menlo Park; xukun ah afar bilood oo xadhig ah Majorie Klapper ee Menlo Park; iyo xukun 15 bilood oo xabsi ah oo lagu soo rogay Augustin Huneeus Jr. ee San Francisco, khamri-cabeedka Napa Valley.
Agustin Huneeus Jr., oo ka tirsan San Francisco, ayaa tagaya magaalada Boston markay tahay 29 March si loo helo dhagaysi la xidhiidha fadeexada ogolaanshaha jaamacadda. . (Matt Stone / Boston Herald)
Xeer-ilaaliyeyaashu waxay leeyihiin Huffman, Sartorio, Klapper, Huneeus iyo eedeysanayaal kale ayaa ku howlan "qorsheyaal" iyo "xishood la'aan" qorshayaal dambiilayaal ah oo lagu aflagaadeeyo carruurtooda kuliyadaha ugu fiican iyadoo "ay kujiraan hodannimo, sharaf weyn. iyo, xaaladaha qaarkood, caan. Waalidkan waxay ka qaateen jagooyin ay jecelyihiin machadyada kale ee "mudnaan mudan" iyagoo ku deeqay tobanaan ama xitaa boqolaal kun oo doolar oo laaluush ah si carruurtoodu u arki karaan dhibcaha SAT iyo ACT ee ay wanaajinayaan ama noqdaan si been abuur ah loo qorsheeyay. sida isboortiga ciyaaraha.
"Wixii khalad ah ee ku saleysan maal iyo in lagu qiimeeyo dareenka mudnaanta, xariggu waa kan kaliya ee wax qora," ayay xeer-ilaaliyeyaashu ku sheegeen qoraalkooda xukunka. Xabsiga, qof walba waxaa loola dhaqmaa si isku mid ah, oo loo le'ekaadaa isla isla markaana isku dhafan iyadoon loo eegeynin xoolahooda, booskooda ama caannimadooda.
Stewart ayaa Katie Couric ugu sheegtay bayaanada 2017 muuqaalkeeda inay u maleyneyso inuusan jirin qof u baahan inuu u adkeysto "sharaf-darrada" waqtigii lagu qaatay xabsiyada federaaliga - "marka laga reebo dilaayaasha iyo noocyo kale oo yar".
2004, guru-ga nololeedku wuxuu ku qaatay shan bilood xabsi haween ah oo ku yaal Alderson, West Virginia. iyo 2005 ka dib markii lagu helay dambi ah inuu been u sheegay baarayaasha federaalka ee ku saabsan suuqa saamiyada. Waxay ku tidhi wareysi kale oo leh Oprah Winfrey in luminta kontaroolada ay si gaar ah ugu adkeyd ganacsatada.
Waxay ka yimaaddeen adduunyo xukunku ku noolaado. Waxay leeyihiin dad ka hooseeya oo waxay u sheegaan waxa la sameeyo. Markaad gasho xabsi federaal ah, ma tihid wax xakun ah, ”ayuu yiri Michael Frantz oo ku saabsan caddaan-cadadeedka lagu eedeeyay inuu la shaqeeyo agaasime Wadatashiga Jil Time . Wuxuu ku qaatay 36 bilood hay'ad federaal ah si looga baadi goobayo canshuurta waana mid ka mid ah lataliyayaasha tirada yar ee la shaqaaleysiiyay si ay uga caawiyaan macaamiisha inay u jiheeyaan nidaamka cadaaladda Mareykanka oo ay ugu diyaar garoobaan nolosha ka dambeysa baararka.
Buuggiisa ugu iibinta badan, "Orange waa kan Madowga", ayuu qoraa Piper Kerman ku qoray: "Waxaa jira tiro la yaab leh oo ah sharciyada rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn, jadwalka taariikhda, iyo cibaadeysiga. Baro sida dhakhsaha leh ee ay u bartaan ama cawaaqibka ka dhalan kara, sida in laguu tixgeliyo nacasnimo, in laguula dhaqmo sidii nacasnimo, oo aad xumaato dhinaca maxbuus kale, oo aad xumaato dhinaca daryeelaha, oo aad xumaato dhinaca la-taliyahaaga, lagu qasbay inaad nadiifiso musqusha, had iyo jeer wax ku cuno internetka markii wax walba la cuni karo, u hel warbixin "toogasho" ama dhacdo dhacdo faylkaaga ah oo loo diro waaxda guryaha gaarka ah ama Doolarka. "
Ugu yaraan xabsi ammaan - ugu badan ee loo aado Huffman iyo kuwa kale ee waalidiinta da'da dhexe ku qabsadaan "Howlgalka Varsity Blues" - rabshadaha iyo burcadda xabsiga uma badna inay noqdaan dhibaato halis ah.
Hase yeeshe, Huffman iyo waalidiinta kale waa inay ka filayaan maxaabiista kale ee asal ahaan liitaa inay xukunno dheer ku bixiyaan dambiyada la xidhiidha daroogada, kuwaas oo soo celin kara maalkooda, ayuu yidhi Larry Levine, aasaasaha lataliyayaasha xabsiga xabsiga Street Street .
Dhanka kale, maxaabiistaan ​​ayaa isku dayi doona inay midba midka kale saaxiib la ahaadaan dano gaar ah, Levin ayaa raacisay. Wuxuu kula talin lahaa Huffman iyo waalidiinta kale inay muujiyaan xushmad, aysan fileynin daaweyn gaar ah, iyo inaysan ka cabanin kiiskooda. Wuxuu sidoo kale u sheegay: "dhegahaaga fur, afkaaguna xidho iskana ilaali riwaayadaha."
La shaqee ilaalada
Laakiin isku dayga inaad la qabsato maxaabiista asal ahaan ka soo kala jeeda waa caqabad kaliya. Mid kale ayaa ka walaacsan ilaalada, dheh maxaabiista hore.
Kerman iyo Coulman waxay soo wariyeen in waardiyayaashu ay dhibaateyn ama maxaabiis galmo ku xadgudbeen. Coulman waxay ka marag kacday inay u adkaysatay dhibaataynta ilaalada maxaa yeelay waxay ka baqday inay lumiso xuquuqdeeda - ama ka sii darayso - haddii ay cabato; waxay ku qaadatay 60 maalmood xabsiga keli ah ka dib markay si cad u shaacisay arin amni oo ku lug leh haweenka.
Levine iyo Frantz ayaa sheegay in waardiyayaashu leeyihiin tababar yar marka loo eego dhiggooda xabsiga gobolka ayna ku dadaalayaan sidii ay khibraddan uga dhigi lahaayeen ciqaab.
Levine, oo muddo sannado ah ku xirneyd 10 xabsi ku yaal dalka oo dhan ka dib markii lagu helay dambiyo la xiriira kufsi, khayaano nabadgelyo iyo inqilaab ka ganacsiga daroogada.
Isu diyaarinta nolosha baararka waa inay biloowdaa bilo kahor xukunka, ayay yiraahdeen Frantz iyo Levine, oo la shaqeeya waalidiinta qaar oo lagu eedeeyay fadeexadan. Huffman iyo qareennada waalidiinta aagga Bay, oo leh taariikho xukun xukun soo socda, kama jawaabin codsiyo ku saabsan habdhaqanka macaamiishooda.
Martha Stewart ayaa timid galabta magaalada New York Abril 23. Hab-nololeedka guru-ga ayaa shan bilood ku qaatay xabsi federaal ah 2004 iyo 2005. (Angela Weiss / AFP / Getty Images)
Mar haddii eedaysanuhu qirto dambiga, waa inay isku dayaan inay galaan xabsiyo nabdoon sida ugu dhow ee suurogalka ah, waqti u helaan inay arrimahooda nadiifiyaan oo ay la kulmaan dhibaato halis ah. Wareysiga lala yeelanayo askarta carbinta ka hor xukunka, ayaa yiri Frantz iyo Levine
Bayaan ay soo saartay, Xafiiska Xabsiyada ayaa sheegay inaysan ka hadli karin halka mid ka mid ah waalidiinta "Howlgalka Varsity Blues" uu ku dambeyn karo. Xafiiska leeyahay siyaasad isku day inaad u xilsaarto maxaabiista wax kabadan 500 km gurigaaga, laakiin tani had iyo goor ma dhacdo haddii ay jiraan "nabadgelyo qaas ah, barnaamij ama walaac dadweyne".
wareysiga, kaasoo baaraya taariikhda qoyska, khibradda shaqada, caafimaadka maskaxda iyo taariikhda dambiga ee qofka la soo eedeeyay, waxaa adeegsada sarkaalka carbinta si uu ugula taliyaa xukun garsoore. Waxay kaloo abuurtaa tusaale ay mas'uuliyiinta xabsigu u adeegsadaan inay ku go'aamiyaan haddii maxaabiista ay u qalmaan tababar iyo barnaamijyo waxbarasho dib-ugu-dhic ah oo yareyn kara waqtigooda adeegga, ayuu yiri Frantz.
Wuxuu sidoo kale sheegay inuu ka caawiyo macaamiisha inay horay u weydiiyaan "faa'iidooyin" kuwaasoo umuuqan kara kuwo fudud laakiin saameyn weyn ku leh tayada nolosha. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara sariiraha gogosha, bustayaal dheeraad ah iyo barkimooyin, iyo sidoo kale booqashooyin dheeraad ah oo laga helo kuwa aad jeceshahay.
Coulman waxay leedahay in loo sheegay inay 360 $ ugu wareejiso akoonkeeda xabsiga kahor inta aysan dhiibin si ay wax uga iibsato gudoomiyaha sida ugu dhaqsaha badan: kabaha shaqada, musqulaha, Benadryl hurdada iyo saacad gacanta lagu rito oo waqtigeeda la joogo. Coulman wuxuu sharraxay in maxaabiista kale ay sameeyeen maalinti ugu horreysay ee xiisaha leh isaga oo ku daray shaambo, kareemo, dhejisyo dhejis ah, surwaal orodka iyo baararka Hershey ee ay horeyba u isticmaali jirtay gadhka iyo dharka.
Levine waxay ku sifeysaa nolol maalmeedka maxaabiista "Groundhog Day": Inaad u kacdid saacadaha 6 si quraac loo quraacdo, ka dib shaqo, qado, shaqo, casho, iyo daminta 21h30 ama 22h00 Stewart nadiifiso sagxadaha lana nadiifiyo xafiisyada; maxaabiista kale waxay shaqo ka helaan jikada oo Levine wuxuu dhahay wuxuu heystaa shaqo wadaadnimo. Levine wuxuu intaa ku daray in xitaa shaqada ugu hooseysa ay macno u leedahay shaqadiisa.
Sida laga soo xigtay Frantz, xabsiga waxaa laga yaabaa inuu si kale u xanuujiyo, caajiska ayaa jabay waqti ka waqti booqashooyinka Wakiilka, safka u yeeraya inuu sameeyo taleefanka daqiiqadaha 15, 30 - kalfadhi kombuyuutareed iyo booqashooyinka ehelka. Levine waxay u sheegtaa macaamiisha inay waqtigooda firaaqada ah u adeegsadaan wax soo saarka: jimicsi, farshaxan, ku akhriyaan maktabada sharciga ama u isticmaalaan xirfadahooda si ay u caawiyaan maxaabiista kale.
Iyagoo og in rikoorkeeda ay ka horjoogsaneyso inay mar labaad u shaqeyso sidii maareeye kaaliye maamul, Coulman waxay baratay inay noqoto la-taliye waxayna hadda ka shaqeysaa xafiiska Difaaca Dadweynaha ee Dallas. Waxay u sheegtaa haweenka jeelka gala, "Faham in waxa aad ku nooshahay ay tahay mid cabsi leh, laakiin waa inaad haysataa qorshe wax qabad inta noloshaada ka hartay mar alla markii xafladdan la soo afjaro."
Coulman wuxuu leeyahay, "Waa xallin, laakiin haddii aad ku guuleysato, waxay kaa dhigaysaa mid xoog badan."
Christina Milian: sida lammaanaha Matt Pokora ay ogaadeen in Ex Nick Cannon ay khiyaameyneysay iyada